ကလေးမလေးရဲ့ အလှကတော့ ပုရိသတွေ ကို ကြွေစင်းသွား စေမယ့် မိမိုက်လွန်း တဲ့ ပုံစံလေး နဲ့ ကပြထား တဲ့ ရွှေဘုံ ရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယို……. – Shwe Naung
ကလေးမလေးရဲ့ အလှကတော့ ပုရိသတွေ ကို ကြွေစင်းသွား စေမယ့် မိမိုက်လွန်း တဲ့ ပုံစံလေး နဲ့ ကပြထား တဲ့ ရွှေဘုံ ရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယို…….
N N | August 23, 2021 | Celebrity | No Comments
မွငျသူတိုငျးငေးလောကျတဲ့ ခစြျစရာ ကောငျးတဲ့ မကြျနှာလေး နဲ့ အမိုကျစား ခန်ဓာကိုယျလေး ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ မောျဒယျ လျ ရှှမေဘုံဆိုတဲ့ မောျဒယျမလေးတစျ ယောကျက ျကို သိကွမယျ ထ ငျပါတ ယျေ နာျ။ မောျဒယျလျ လောက ကိုဝငျရောကျတာ မကွာ သေးပငျမဲ့
ပရိသတျ အမြားအပွားရဲ့ တစျခဲနကျ အားပေးမှုကို ရယူ ပိုငျဆိုငျထားတာ ဖွစျပါတယျ။ ယောကြာျးလေး ပရိသတျတှေ ရဲ့ ဝနျးရံ အားေ ပးမှုအမြားဆုံး ရရှိထားတဲ့သူမ ကတော့ social media လောကမှာ နာမညျ တစျလုံးနဲ့ ရပျတညျန တစျယောကျ လညျး ဖွစျပါတယျ။
သူမရဲ့ ခစြျစရာကောငျးပွီး ဆကျ ဆီကြ ကအြမိုကျစားပုံတှနေဲ့ ညို့အားပွငျးပွငျး ဆှဲဆောငျနို ငျသူလေး ဖွစျတာကွောငျ့ လကျရှိ ဖေ့ဘှတျစာ မကြျနှာမှာ ရပေနျးစားလူကွိုကျမြားကာ
ပုရိသတှေ ဝ နျးရံေ နကွတာလညျးဖွစျပါတယျ။သူမရဲ့ အမိုကျစားပုံရိပျတှကေို လူမှုကှနျယကျ ဖေ့ဘှတျပေါျတှငျ အမြားဆုံး တငျလေ့ရှိတာတှေ့ရပါတယျ။
အခုမှာတော့ ခက်မိုက်မိုက် ပုံစံလေးနဲ့ ရိုက်ထား တဲ့ ဗီဒီယိုလေး ကို ပရိသတ်တွေ အတွက် တင်ပေးလာတာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ရွှေမဘုံ တစ်ယောက် ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ နဲ့ လန်းလွန်းနေ တာလည်းြ ဖစ် ပါတယ်။သူမ ကတော့ လတ်တလော လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာမှာ
အမျိုးသားတွေရဲ့ ဝန်းရံ ခြင်းကို ခံနေရတာ ဖြစ်ပြီး လူကြိုက် များလာတဲ့ မော်ဒယ် အမိုက်စားလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ…ချစ်ပရိ သတ်တွေ တွက် ရွှေမဘုံ ရဲ့ အလန်စား ဗီဒီယိုလေးကို မျှဝေပေး လိုက်ပါတယ်။
အလန်းစား ဖက်ရှင်နဲ့ အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းများဖြင့် ပရိသတ်ကို ညို့ယူဖမ်းစား ထားတဲ့ မေပန်းချီရဲ့ အကြမ်းစား ဗီဒီယိုလေး………
ရှေ့သွားနောက်လိုက်ညီနေ ပြီး အနုပညာမောင်နှမ တွေဖြစ်တဲ့ မြင့်မြတ် နဲ့ မအေးဝတ်ရည်သောင်း တို့ရဲ့ ချစ်စရာ ရိုက်ကွင်းက ပုံရိပ်လေးများ
ရင်ခုန်သံ မြန်အောင် ဖမ်းစား လိုက် ပြန်တဲ့ မော်ဒယ် စုမြတ်ဖူး ရဲ့ ဗီဒီယို